China 150w NkwukwỤkwỤkwỤkwỤkwỤkwỌ ỌhỤkwỤkwỤkwỤkwỌ China Manufacturers & Suppliers & Factory
150w NkwukwỤkwỤkwỤkwỤkwỤkwỌ ỌhỤkwỤkwỤkwỤkwỌ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka 150w NkwukwỤkwỤkwỤkwỤkwỤkwỌ ỌhỤkwỤkwỤkwỤkwỌ)
150W GỤKWU ỤLỌ ỌKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ 18000LM
Nke a Light Light 18000 Ọdịdị bụ nnọchi anya maka 400W HID ma ọ bụ HPS Fixtures. Zọpụta ike, ego, na oge site na-eme ka ọkụ ọkụ gaa na ọkụ. Na 150 Watts na ọnụ ọgụgụ lumen nke 19500, ogige ntụrụndụ, ebe ndị na-adọba ụgbọala, ebe egwuregwu na n'okporo ámá ga-anọgide na-adị mma ma na-enwu gbaa na 150W Led Post Top...
ETL Portable Light Flood Light for Backyard 150W
Igwe ọkụ Ibe Anyị 150W nwere ike ime ka ihe dị elu ruo 18000lm. Ihu Igwe mmiri a na-eche ihu n’azụ 150w bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Anyị jiri mgbanaka oriọna dị elu dị ka isi iyi nke ìhè maka anyị Ìhè Ìhè nke Na-enwu n'azụ 150w . Ọkụ zenith a na-enwu ya na ihe eji eme ihe eji eme ihe, ihe na...
Ihe eji eme ka ihe dị ọkụ na-acha ọkụ dị ọkụ 150W 5000K
Ebube anyị na-ekpuchi ọkụ 150w bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Nke a na-ekpuchi ọkụ ọkụ 150w dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ìhè Ìhè nke Na-enwusi Ike nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Anyị sylvania na-eburu ọkụ ọkụ bụ slim design slim na-achọ, dị...
Igwe ọkụ ikuku CWpy 150W 200W
Ebe anyị na-edebe ọdụ ụgbọ oloko Led Gas bụ IP65, ahaziri iche maka ọdụ gas na ebe ndọba ụgbọala. Nke a 200w Led Gas Station Canopy Light Ọ dị mma maka nrụnye. Stationlọ ọrụ gas na-ebute ndozi ọkụ nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche maka ịhọrọ. Ebe nchekwa Gas anyị 150W bụ s elu slim imewe na mara mma anya, mfe...
Ụlọ ọkụ na-ekpuchi ọkụ ụgbọ mmiri 150W
Ụlọ ọrụ ụgbọ mmiri anyị dị na Gas 150W bụ IP65, nke a kwadebere maka ebe gas na ọdụ ụgbọ oloko. Ụlọ Osimiri Gas a dị mma maka nkwụsịtụ ma ọ bụ n'elu ebe echichi. Ụlọ ọkụ gas na-ere ọkụ nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche iche maka nhọrọ. Ebube ndị anyị na- eburu maka ọkụ ụgbọ ala bụ slim design slim na-achọ,...
Ndozi Stationlọ Ọrụ Gas Nke Led Gas 150W
Igwe ọkụ mkpuchi gas anyị na-adọba ụgbọala IP65 bụ IP65, ahaziri iche maka ọdụ gas na ebe ndọba ụgbọala. Nke a Led Gas Station Light 150w Ọ dị mma maka nrụnye. Ndozi ebe a na-edebe Gas nke Gas nwere 60W, 100W, 130W na 150W ike dị iche maka ịhọrọ. Ọkụ oriọna anyị na- ebute ụgbọ ala gas bụ s elu slim imewe na mara mma...
100W 150W High Bay Led Luminaire 5000K
The High Bay 150w Led bụ 19500 lumens na 130lm / w. Nke a High Bay 150w Luminaire bụ DOB na-enweghị onye ọkwọ ụgbọ ala. The High Bay 100w Led dị na 3000k, 4000k.5000k na 5700k. Nnukwu ọdọ mmiri anyị 80w bụ EC ROHS ETL DLC kwadoro. Nke a dị elu dị elu 1000w eji maka ebe a na-adọba ụgbọala, nhazi ihe oriri na ịkwadebe,...
150w NkwukwỤkwỤkwỤkwỤkwỤkwỌ ỌhỤkwỤkwỤkwỤkwỌ 150W NKWUKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ ỌHỤKWỤKWỤKWỤKWỌ 50W UGWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ ỌHỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ NDỊ ỌHỤRỤ 100W GỤKWU ỤLỌ ỌHỤKWỤKWỤKWỤKWỌ NDỊ ỌZỌ 175W Ngwakọta nke ọkpụkpụ nke ọkpụkpụ GỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ NKE ỌHỤRỤ 200w Ụlọ ahịa ụlọ ahịa ọkụ 30W NKWUKWU NDỊ ỌHỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ